Jamaica Tourism Gurukota rinosangana neDominican Republic Mumiriri kuJamaica
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica Tourism Gurukota rinosangana neDominican Republic Mumiriri kuJamaica
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Dominican Republic Mumiriri kuJamaica neJamaica Gurukota Rezvekushanya
Jamaica Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett, (anoonekwa kurudyi pamufananidzo) anokwazisa Mumiriri weDominican Republic kuJamaica, Her Excellency Angie Martinez Tejera, pamusangano wakakosha kumahofisi ake musi waGunyana 1, 2021.
Vatungamiriri vaviri ava vakakurukura hukama huripo uye hweramangwana pakati penyika mbiri.
Iko mukana wekuunza yakananga ndege pakati peJamaica neDominican Republic yaivewo patafura.
Iyo Jamaica Tourism Yehushumiri inoramba yakazvipira kuona kuti chikamu chekushanya chinoita mupiro wakazara kwazvo.
Panguva yemusangano wavo vakakurukura nezvekusimbisa hukama pakati peJamaica neDominican Republic pamwe nemukana wekuunza nendege yakananga pakati penyika mbiri idzi.
Iyo Jamaica Ministry of Tourism pamwe nemasangano ayo vari pachinangwa chekusimudzira nekushandura Chigadzirwa chekushanya cheJamaica, apo ndichivimbisa kuti mabhenefiti ayo anoyerera kubva kunzvimbo yekushanya akawedzerwa kune vese maJamaica. Kusvika pari zvino yakaisa marongero nemaitiro anozopa simba rekushanya seinjini yekukura kwehupfumi hweJamaican. Bazi rinoramba rakazvipira kuona kuti chikamu chezvekushanya chinoita mupiro wakazara unobudirira mukusimudzira hupfumi hweJamaica zvichipiwa mukana wakakura wekuwana.
panguva Jamaica Tourism Ministry, ivo vari kutungamira mubhadharo wekusimbisa hukama pakati pekushanya uye zvimwe zvikamu senge zvekurima, kugadzira, uye varaidzo, uye mukuita izvi kukurudzira munhu wese weJamaican kuti atore chikamu chavo mukuvandudza chigadzirwa chenyika yekushanyirwa, kuchengetedza mari, nekuvandudza nekusiyana chikamu chekusimudzira kukura uye kugadzira mabasa kune vamwe maJamaica. Bazi rinoona izvi zvichikosha pakupona kweJamaica uye kubudirira uye yaita izvi kuburikidza nenzira inosanganisirwa, inotungamirwa neVatambi Boards, kuburikidza nekubvunzana kwakakura.